मन परेको किताब रातभरि पढ्छु ! :: Kitab Kiro - Complete Book News
मन परेको किताब रातभरि पढ्छु !
२०७४ मंसिर ९ गते रवीन्द्र अधिकारी
नेकपा एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीको हिजोआज अर्को परिचय पनि बनेको छ- लेखक। उनले लेखेको पुस्तक 'समृद्ध नेपाल' को दोस्रो संस्करण पनि बजारमा आएको छ। संसदको विकास समितिका सभापति अधिकारी व्यस्त समय तालिकाकाबीच पुस्तक पढ्न छुटाउँदैनन्। पत्रपत्रिकामा विकास निर्माणका विषयमा उनका लेखहरु पनि प्रकाशित भइरहन्छन्। नेता अधिकारीको पुस्तक अध्ययनबारे थाहाखबरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
प्राथमिक विद्यालय तहमा कक्षागत गीत लगायत पाठ्यक्रममा भएका कविता कण्ठस्थ हुन्थे। कथासमेत कण्ठस्थ पार्थें। पाँच कक्षा पास गरेपछि मात्र पाठ्यक्रम बाहिरका किताब पठ्न पाएँ। त्यतिबेला घरमा भएका स्वस्थानी र महाभारत लगायत धार्मिक पुस्तक पढेँ। स-साना कथा र कविताका किताबहरु पनि पाइन्थे, ती पनि पढेँ।
कक्षा चढ्दै गएपछि रसियन साहित्य र प्रेम साहित्य पढियो। नेपाली प्रेम साहित्य र प्रगतिशील रसियन साहित्य पढ्दा मिठो लाग्यो। त्यसले साहित्यिक कृति पढ्ने बानी बस्यो। त्यतिबेला मेरो रुची किताब संकलनमा थियो। मसँग धेरै किताब हुन्थे। म अरु सपिङ गर्नभन्दा पनि किताब किन्न रमाउँथे। पैसा पायो कि किताब किनिहाल्ने बानी थियो।
एकचोटी दिल्लीमा मैले ३ हजार रुपैयाँको किताब किनेको थिएँ। जुन मेरो बढी पैसा परेको किताब हो। त्यो किताब एक हप्तामै पढिसिध्याएँ।
पहिला गाडीमा अहिले राती पढ्छु
काठमाडौंबाट पोखरा पुग्दा कम्तीमा ६ देखि ७ घण्टा लाग्ने। अनि पोखरा जाँदा बाटोमा एउटा किताब पढेर सिध्याउँथे। अहिले गाडीमा पत्रपत्रिका मात्र पढिन्छ। किताब पढ्न सक्दिन। अहिले रातीको समयमा मात्र किताब पढ्छु। कुनै किताब साह्रै मन पर्‍यो भने रातभरीमा पढिसिध्याउँछु।
Copied from : http://thahakhabar.com/news/2903